Bit By Bit - The ramangwana - 7.2.1 The kubatane nekuita Readymades uye Custommades
Kana wakachena Chirinuruwowaka nzira kana yakachena Custommade nzira zvakazara utilizes ari nezvaanogona ari digitaalinen zera. Mune ramangwana tiri kuenda kusika nevaNefirimu.
Mumashoko okutanga, Ini Akasiyanisa Chirinuruwowaka werudzii Marcel Duchamp pamwechete Custommade manyorero Michelangelo. Kusiyana Izvi anopamba musiyano pakati date masayendisiti, vanenge kushanda Readymades, uye masayendisiti magariro, vanenge kushanda Custommades. Zvisinei, munguva yemberi, ndinotarisira kuti tichaona zvakawanda nevaNefirimu nokuti mumwe nomumwe nzira yakaisvonaka ndivo shoma. Vatsvakurudzi avo chete vanoda kushandisa Readymades vari kuenda zvakaoma nokuti havasi vazhinji Readymades akanaka munyika. Saka, vatsvakurudzi nokunamatira ichi yakaisvonaka Style vari kana kuenda kundobayira unhu nokushandisa dzakashata Readymades, kana vari kuenda kupedza mijenya nguva ndichitsvaka akakwana secondary. Vatsvakurudzi avo chete vanoda kushandisa Custommades, Ukuwo, vari kuenda chibayiro akamboona. Zvisinei, vakaberekwa kuswedera, anogona nokubatanidza pakafunuka runobva Readymades pamwe zvakasimba zvakakodzera pakati mubvunzo uye mashoko anobva Custommades.
Takaona mienzaniso VaNefirimu ava neimwe mana empirical zvitsauko. MuChitsauko 2, takaona kuti Google flu Trends rinobatanidza ane nguva dzose-iri guru date hurongwa (kutsvaka queries) aine fungidziro-inobva chinyakare chipimo hurongwa (CDC yokuSpain zvokuongorora hurongwa) kubereka nokukurumidza kufungidzira (Ginsberg et al. 2009) . MuChitsauko 3, takaona kuti Stephen Ansolabehere uye Eitan Hersh (2012) aibatanidza tsika-yakaitwa ongororo Data nehurumende administrative Data vakagadzirira akagadzirwa kuti tidzidze zvakawanda pamusoro zvechadenga vanhu chaizvoizvo kuvhota. MuChitsauko 4, takaona kuti OPower kuedza kuti nokubatanidza vakagadzirira akagadzirwa magetsi chipimo kwezvivako aine mishonga netsika-akaita kudzidza migumisiro patsika dzemunharaunda pane maitiro pane hombe chikero (Allcott 2015) . Pakupedzisira, muChitsauko 5, ndakakuyambirai sei Kenneth Benoît uye nevamwe (2015) rinoshandiswa tsika-vakaita boka-Coding mutoo kuti akagadzirira akagadzirwa akagadzirwa manifestos zvokuumbwa ezvematongwerwe enyika kuitira kuti pave mashoko kuti vanotsvakurudza vanogona kushandisa kudzidza sarudzo uye simba mugwaro nharo.
Mienzaniso iyi ina zvose zvinoratidza kuti nzira simba mune ramangwana richange rokuvandudza guru mashoko manyuko, izvo zvisina inounganidzwa pakutsvakurudza, pamwe mamwe mashoko kuti anoita kuti nani kutsvakurudza (Groves 2011) . Kana anotanga pamwe Custommade kana Chirinuruwowaka, ichi chemasanganiswa manyorerwo hune vimbiso zvikuru matambudziko akawanda tsvakurudzo.